सत्ताबाटै गणतन्त्र र सङ्घीयता धरापमाः कोइराला
इटहरीः नेपाली काँग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले सत्तामा बसेकाहरूबाटै गणतन्त्र र सङ्घीयतामाथि खतरा बढेको बताएका छन्। केही दिन अगाडी बालुवाटारमा बसेको सर्वदलीय बैठकलाई लक्षित गर्दै कोइरालाले पूर्व राजा र विप्लव समूहबाट गणतन्त्रमाथि खतरा बढ्यो भनेर निष्कर्ष निकालिनु हास्यास्पद रहेको तर्क गरे । कसरी खतरा बढ्यो पूर्व राजा र विप्लव समूहबाट ? खतरा त तपॉइहरुबाट बढेको छ, जो अहिले राज्य सत्तामा हुनुहुन्छ। जिकिर गरे ।
कम्युनिस्ट समर्थित संस्था जनअधिकार अभियान नेपालले विराटनगरमा आयोजना गरेको वर्तमान राजनीतिक यथास्थिति र मानव अधिक विषयक अन्तरक्रियालाई सम्बोधन गर्दै उनले कम्युनिस्टहरू व्यवस्था परिवर्तन या संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्ने तर्फ लाग्ने हो भने त्यो कम्युनिस्टहरूकै लागी दुर्भाग्य हुने चेतावनी समेत दिए।
मञ्चमा रहेका कम्युनिस्ट नेताहरूप्रति लक्षित गर्दै कोइरालाले भने संसदीय व्यवस्था विरुद्धको लडाई मा लाग्नुहुन्छ भने यो व्यवस्था जोगाउॅन हामी पनि जस्तोसुकै लडाई लड्न तयार छौँ।
विप्लव समूहलाई वार्ता गरेर राजनैतिक प्रक्रियाबाट मूलधारमा ल्याउॅनुको विकल्प नभएको बताउॅदै कोइरालाले राज्यले निषेधको बाटो अपनाएर देशमा द्धन्द निम्त्याउॅन खोजेको बताए।
कार्यक्रममा मानव अधिकार आयोगका सदस्य गोविन्द शर्मालेमानव अधिकारको अवस्था अत्यन्तै नाजुक रहेको टिप्पणी गरे ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कट्टेल,नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष गोपाल किराँती,पूर्व सांसद एकराज भण्डारी,पत्रकार एवं बाम विश्लेषक नरेन्द्रजंग पिटर लगायतले देशमा अब संसदीय व्यवस्था आवश्यक नरहेको बताए।